च्यानल सुरुnel | यात्रा समाचार
त्यहाँ धेरै पुरातन स्मारकहरू छन् जसले हामीलाई विस्मयसाथ छोड्दछ र आश्चर्यचकित पार्दछ, कसरी पृथ्वीमा तिनीहरूले यो गरे? तर सत्य यो हो कि मानिस धेरै सरल छ र टेक्नोलोजी प्रगतिको रूपमा, आश्चर्यजनक आधुनिक ईन्जिनियरि ofको डिजाइन र निर्माणले अग्रिम कार्य गर्दछ: च्यानल सुरुnel, उदाहरणका लागि।
च्यानल सुरुnel, वा ले सुरुnel सुस ला मन्चे वा बस सुरुnelयो एक सपना साकार भएको छ र आज हामी जान्दछौं कि उनीहरूले कसरी यसको निर्माण गरे, कहिले, कसरी यसले कार्य गर्दछ र यदि तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसलाई कसरी पार गर्ने भनेर।
1 अंग्रेजी च्यानल
यो को नामबाट पनि चिनिन्छ अंग्रेजी च्यानल र यो एक बाहेक केहि छैन उत्तरी समुद्रसँग संचार गर्ने अटलान्टिक महासागरको पाख, ग्रेट ब्रिटेनबाट उत्तर पश्चिमी फ्रान्स अलग गर्दै।
यो 560० किलोमिटर लामो छ र चौडाइ जुन २240० र .33.3 XNUMX. kilometers किलोमिटरको बीचमा भिन्न हुन्छ, जुन ठ्याक्कै पास डे क्यालाइस हो। केहि टापुहरु छन् जुन आज अ flag्ग्रेजी झण्डा मुनि छन् र च्यानल आईल्यान्डको रूपमा चिनिन्छन्।
यो कहिले गठन भएको थियो? लाग्छ कि अन्तिम बरफ युग को अन्त मा गठन गरिएको थियोकरिब १० हजार वर्ष अगाडि त्यस बेला ग्रेट ब्रिटेनका टापुहरू अझै युरोपसँग जोडिएका थिए तर जब पग्लिन्छ तब त्यहाँ विशाल झील र एक समुद्री जलको निर्माण भयो जुन वास्तवमा कैलाइस र डोभरको बीचमा रहेको एउटा हो। पछि, क्षरणको प्रक्रियाले च्यानल सिर्जना गर्‍यो र स्थायी छालहरूले यसलाई चौडा पार्दै थिए।
स्पष्टतः युरोपबाट छुट्टिएर जाँदा ब्रिटिश टापुलाई आफ्नै छाप लाग्यो र यद्यपि यसले उनीहरूलाई द्वन्द्व र आक्रमणबाट जोगाउँथ्यो तर तिनीहरू एक सय प्रतिशत छुट पाएका छैनन्। यो याद गर्न पर्याप्त छ कि तिनीहरू रोमीहरू र पछि नर्मनहरूले आक्रमण गरेका थिए, र नेभिगेसन र उड्डयनको कारण, अलगाव बिर्सिएको छ।
यो अनुमान गरिएको छ एक दिन पाँच सय जहाज नहर पार किनकि यो एक महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक समुद्र मार्ग हो जुन ग्रेट ब्रिटेन र युरोपको बीचमा र एट्लान्टिक र उत्तर समुद्री बीच हो। चालीस बर्ष भन्दा बढि कठिनाइ र दुर्घटना पछि त्यहाँ दुईवटा मार्गहरू हुनेछन् भनी निर्णय गरिएको थियो: उत्तरतर्फ यात्रा गर्नेहरूले फ्रान्सेली मार्ग र दक्षिण यात्रा गर्ने अंग्रेजी मार्ग प्रयोग गर्नेछन्। र कुरा भए पनि, अझै एक वा दुई दुर्घटनाहरू प्रति वर्ष रेकर्ड गरिएका छन्।
र कहिले च्यानल टनेल निर्माण गरियो? जब थियो युरोटनेल?
यो विचारले लामो समयको लागि यूरोपीयन सरकारहरूका टाउकोमा प्रेत उडायो। वास्तवमा नेपोलियनले त्यो सपना देखिसकेको छ, तर स्पष्टतः ईन्जिनियरि itले मात्र २० औं शताब्दीमा यो गराउन सक्छ। यो एक को बारे मा छ रेलवे सुरुnel जुन पानीमुनि पार हुन्छ र मे,, १61994 on मा उद्घाटन भयो, फेरी सेवासँग पूरक भयो जुन शताब्दियौंदेखि केवल सम्भव क्रसिंग नै थियो।
निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा १ 1984। XNUMX मा फ्रान्समा मिटर्रान्ड र इ England्ल्यान्डमा ट्याचरको शासनको अधीनमा शुरू भयो। बिभिन्न विचार प्रस्तुत गरिएको थियो, सुरु,, पुलहरू, केहि धेरै महँगो थियो, अरूलाई पूरा गर्न गाह्रो। अन्तमा, स्वीकृत प्रस्ताव निर्माण कम्पनी बेलफोर बिट्टीको थियो।
डिजाइन कसरी छ? बारेमा दुई समानान्तर रेलवे टनेलहरू समानान्तरमा चलिरहेको छ. तिनीहरूको बीचमा तेस्रो सुरुnel्ग चलाउँछ जुन मर्मतका लागि प्रयोग गरिन्छ। सबैजना ट्रक र कार पनि चलाउन सक्षम हुनुपर्छ। एक मोटे अनुमानले $3billion अर्ब को कुल आंकडा देखा, त्यसैले पचास बैंकहरु भाग लिए र लगभग १,6,००० कुशल कामदारहरू राखिए।
उत्खननको साथ सुरू गर्न, अंग्रेजी च्यानलको भूगोलको अध्ययन गर्नुपर्‍यो र एक पटक गहिराईको निर्णय भएपछि नहरको दुबै तिर काम सुरु भयो किनभने उद्देश्य थियो बीचमा सामेल हुनुहोस्। फ्रान्सेली पक्षको काम सat्गटेको गाउँ नजिक र अंग्रेजी पक्षको डोक्स नजिकै शेक्सपियर क्लिफमा शुरू भयो। निस्सन्देह, बुलडोजरहरू विशाल थिए र एक्लै उत्खनन गर्न, मलबे स collecting्कलन गर्न, र फेरि सुरुnelमा पुर्याउन सक्षम थिए।
उत्खनन गरिएका अवशेषहरू अंग्रेजी तर्फ फ्रान्सेली पक्षको रेलगाडीहरूमा सतहमा ल्याइयो, तिनीहरूलाई पानीसँग मिसाइएको थियो र पाइपले उठाएको थियो। यी विशेष उत्खननकर्ताहरुलाई TBM भनिन्छ। उत्खननको क्रम अघि बढ्दै जाँदा सुरु concreteका पट्टिहरू क concrete्क्रीटद्वारा प्रबल गरियो ताकि यो दबाबको प्रतिरोध गर्न र एकै समयमा यसलाई वाटरप्रूफ बनाउँदछ।
तर इञ्जिनियरहरूले कसरी यी दुई सुरु meetहरू नहरको बीचमा भेट्ने छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्न सके? ठीक छ, तिनीहरूले विशेष उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्दथ्यो, जसमा लेजरहरू पनि थिए, र यो सजिलो थिएन र लामो समय सम्म उनीहरूले यो काम गर्दछन् भनेर पूर्ण रूपमा निश्चित थिएनन्। तर तिनीहरूले यो बनाए, र डिसेम्बर १, १ 1 1990 ० मा ठूलो सभा भयो र दुई कामदारहरू जसको नाम चिठ्ठामा कोरिएको थियो उनीहरूले हात मिलाए।
जे भए पनि, युरो टनेल पूरा हुन अझै धेरै लामो बाटो बाँकी थियो, त्यसैले कामहरू एकको रूपमा नभएर तीन सुरुnelहरू जडान हुनुपर्‍यो। अन्य बैठक मे २२, १ 22 1991 १ मा भएको थियो र तेस्रो र अन्तिम एकै वर्षको जून २ 28 मा भयो। पछि त्यहाँ टर्मिनलहरू, विद्युतीय प्रणालीहरू, फायर फाइटिंग सिस्टमहरू, भेन्टिलेसन सिस्टम आदि वर्षौं बित्नेछ।
त्यसपछि डिसेम्बर १०, १ 10 1993 on मा पहिलो परीक्षण उत्पादन भएको थियो र यो operational वर्ष काम र १6अरब डलर पछि मे 1994, १ 15 80 operational मा परिचालन भयो (यो अनुमान गरिएको छ कि screen०% महँगो महँगो देखाइएको भन्दा पनि)। आजकल त्यहाँ दुई रेल सेवाहरू छन्, शटल त्यो ट्रक, मोटरसाइकल र कार र परिवहन गर्दछ Eurostar त्यसले यात्रुहरूलाई बोक्दछ। -०-विषम किलोमिटर लामो 50 are छन् जुन पनडुब्बीहरू हुन्।
युरोस्टारले पेरिसलाई लन्डनसँग जोक्न दुई घण्टा २० मिनेट लिन्छ y ब्रसेल्सलाई लन्डनसँग जोड्ने घण्टा connect 57 मिनेट। यदि तपाईं आफ्नो कारको साथ यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईं भित्र रहन सक्नुहुन्छ वा रेलबाट हिंड्न सक्नुहुन्छ जब यो सुरुnel पार गर्दछ।
र यहाँ समाप्त गर्न केहि यहाँ छन् जिज्ञासु तथ्यहरु च्यानल च्यानलको बारेमा तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ:
यो प्रयोगमा रहेको विश्वको ११ औं सबैभन्दा लामो सुरुnel हो र सबैभन्दा लामो पानीमुनिको अंश छ।
अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इञ्जिनियरहरूको लागि आधुनिक संसारको सात आश्चर्य मध्ये एक हो.
आठ जना अ English्ग्रेजी १० जना कामदारहरू यसको निर्माणमा मरे।
समुद्री किनारमुनि सुरु tunको औसत गहराई 50० मिटर र सबैभन्दा कम पोइन्ट meters 75 मिटर छ।
प्रत्येक दिन करीव trains०० रेलहरू यसमा औसत thousand०० हजार यात्रुहरू बोक्छन्।
भएको छ तीन आगो, १ 1996 2006,, २०० 2012 र २०१२ जुन यसको क्षणिक बन्द गर्न बाध्य पार्‍यो। सबैभन्दा गम्भीर पहिलो र प्रभावित कार्यहरू छ महिनाको लागि थियो।
२०० in मा पाँच यूरोस्टार रेलहरूले टुक्रियो र दुई हजार यात्रुहरूलाई १ 2009 घण्टासम्म बिना बिजुली, पानी र खाना बिना नै रोक्दछ।
शटल गाडीहरू 775 मिटर लामो छन्।
सुरुnel कम्तिमा १२० बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
गर्मी मा यात्रा अधिक महँगो छ, विशेष गरी सप्ताहन्तमा। यो मिडवेक बिहान सबेरै वा राती अबेर सम्म यात्रा गर्न सुझाव दिइन्छ। अ side्ग्रेजी तर्फ, मूल्यहरू est £ car को आसपासको फोरक्स्टोनबाट क्यालाइससम्म वा London from Paris बाट लन्डनदेखि पेरिस, ब्रसेल्स, लिलसम्म हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » च्यानल सुरुnel